7 Yakanakisisa Bachelor Uye Bachelorette Trips MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Yakanakisisa Bachelor Uye Bachelorette Trips MuEurope
Kuronga bachelorette kana bachelor pati ndiyo yakanakisa chikamu chekuva murume akanakisisa kana musikana wekuremekedzwa. Ndezvipi zvingave zvinonakidza kupfuura kuwana ese gang muunganidze kune yakaipa dhiza kuEurope? Kunyanya pamberi pevaya vane rombo muboka vagare pasi.
Europe inzvimbo huru yekuenda kune mapato pati. Takabata ruoko 7 yeakanakisa bachelor uye bachelorette rwendo muEurope. Kubva pane yakasarudzika spa-themed nzendo kuenda kune vese-husiku mutambo uye kubhuroka. saka, iwe unosungirwa kugadzira rwendo runopisa-pisa rwemuchati uye chikomba-chekuva.
1. Hedonistic Budget-Youshamwari Dhivhari / Bachelorette MuBerlin
Iine chiitiko chikuru chebar, Berlin inzvimbo inonakidza yekuenda kunonakidza uye inonakidza bachelor uye bachelorette rwendo muEurope.
Berlin inozivikanwa nemapato ayo anopenga uye Oktoberfest uye yakanakira a vhiki kupera. Iwe unogona kutanga bato nekuwana mifanidzo inotonhorera yeboka pane inozivikanwa East Side Gallery. ndokubva, enderera kune akasarudzika mabara kushanya kana kuwana adventurous uye enda uchimhanya. Uyezve, Berlin kumusha kune mamwe makuru Spas, kwawaigona kutsvaira kunze kwehusiku hwese mushure mehusiku hwekubvutira.
2. Bachelorette / Bachelor Rwendo KuAmsterdam
Inotyisa uye inofadza, Amsterdam ndiro guta reEurope yezvivi uye paradhiso shoma. Kana iwe uri kuronga rwendo rwekucheka bachelorette kuenda kuEurope, ipapo Amsterdam ndiye anonyanya kunaka. Maruva anotsemuka, dzimba dzinoyevedza uye dzinotapira kofi, nzira dzebhasikoro, uye zvechokwadi mutambo wemaruva muna Chivabvu. Zvese zvishamiso izvi zvichaita kuti mwenga-ave-anzwe mudenga rechinomwe.
zvisinei, kana iwe uchifarira vhiki rinopenga kupemberera nguva dzekupedzisira dzerusununguko, ipapo Amsterdam yakakwana kumusango bachelor bato. Kutanga kuMuse du Sexe kuenda kumatunhu matsvuku emagetsi, uye wapedza nokunwa uye striptease kudya kwemanheru. saka, rwendo rwe bachelor kuAmsterdam pasina mubvunzo rwichava rwendo risingakanganwiki.
3. Bachelorette / Bachelor Rwendo KuPrague
Vanamai vacho vachanyatsokoshesa maonero akanaka eguta rePrague, akitekicha, uye iwe. Pamusoro pe, Prague inozivikanwa kune yayo yepamusoro-notch doro bindu uye cocktail mabara. Izvi zvinoreva kuti mabara ePrague ari munzvimbo dzakanakisa uye anonwa zvinonwiwa zvakanyanya uye zvine hungwaru muEurope, semuyenzaniso, Hemingway cocktail bar. Mushure mekunwa mashoma kana muchida husiku chaihwo husiku, musoro kuwana Prague ane mukurumbira pasi Nightlife mamiriro. Kuporesa mangwanani iwayo, tarisa yakanakisa kofi nzvimbo muPrague, Mug Cafe. dzakagadzirirwa wavo akapfuma kofi zvinwiwa uye zvinonaka chikafu.
zvisinei, kana usiri kuda kurasikirwa nepfungwa dzako muusiku hwezeze, wobva waenda panze peguta. Prague imba yekugara yakawanda thermals uye spas uko iwe unogona kuwana pamper iwe pachako mushure mekushanyira iyo enchant castle. Izvi zvechokwadi zvichaita kuti mwenga-ave-anzwe semuchinda mukati ngano. Chimwe chinhu chikuru varume chaicho chaicho chaicho kuda kuenda kurukova.
4. Rwendo rwekuBudapest
Zvinoshamisa kuvaka uye rwizi rweDanube runomhanya mhiri, ita Budapest nzvimbo inoshamisa yekuenda ku bachelorette uye bachelor rwendo.
Zvinwiwa uye zvechikepe zvinofamba murwizi rweDanube, kuyambuka guta negadziridzo inoshamisa yekuvaka, yakanakira bachelorette uye bachelor pati. Imwe sarudzo yakakura ndeyokuzorora svondo mune yakasvibira spa nevasikana. Budapest iguta rakakura re nzendo dzekudya, kwaunoyedza waini yenyika kubva kuna Eger naSomlo uye kuravira zvetsika zveHungary ndiro mumutambo kupemberera hupenyu hwokupedzisira.
Faust Wine Cellar ndeimwe yekare cellars muEurope uye kwaunogona Nakidzwa newaini yakanaka kwazvo uye ravira miromo yemvura inonwa uye zvimwe zvinonaka.
Vienna kusvika Budapest neTreni
Prague kuBudapest neTreni
Munich kuBudapest neTreni
Graz kusvika kuBudapest neTreni
5. Bachelor / Bachelorette Rwendo Kuenda kuTirol
Kune iyo inonyanya adventurous uye adrenaline-inowedzera bachelor rwendo kuEurope, iyo nzvimbo yeTirol muAustria ndiyo yakanakisa kuenda. Iwe unozonzwa kuti urikudzokera kwazvakabva. Kugara uchitenderedza moto wemusasa, kunze kwekabati rako rematanda kune barbeque uye zvinwiwa. Kana iro gang riri kumusoro mutambo wekukwira dombo, Rafting, uye zvimwe zvakawanda zvekunze zviitiko, ndokubva Area47, sarudzo yakasarudzika yevose-vakomana vhiki neyekuru pati.
Tirol zvakare yakanakira kune bachelorette rwendo, kunyanya kana iwe uri sportive uye uchida kuona zvakasikwa mune imwe yeiyo yakawanda nzvimbo yakanaka mu Europe. Maonero anoshamisa uye mhepo nyowani yakakwana kubatana uye kugadzira nguva dzisingakanganwike mumasango uye mapopoma emvura eTirol.
Munich kusvika Innsbruck neTreni
Salzburg kune Innsbruck neTreni
Oberstdorf kuti Innsbruck neTreni
Graz kuInnsbruck neTreni
Mafungiro anotyisa, makomo, mipata, uye mapopoma emvura Swiss Alps ari akakodzera kuronga kurota bachelorette rwendo muEurope. Iwo Swiss Alps ari ese ari paradhiso uye Disneyland yechikwata chinodakadza. Semuyenzaniso, kana boka rako richida zviitiko zvekunze, ipapo unogona kuenda kunotyaira kana iri nguva yechando. kana, pane rimwe divi, kana iri rwendo rwechirimo kana yezhizha, ndokubva, kufamba, kana kutonhora mumusha unoyevedza ndizvo chete zvezvinhu zvishoma zvekuita munzvimbo ino inoshamisa.
Nepo bachelor uye bachelorette rwendo kuSwitzerland Alps inogona kunge yakanaka kupfuura kupera kwevhiki kuenda kuBerlin kana Prague, zvinogona zvakare kuve kwaunogadzira ndangariro dzinogara kweupenyu hwese uye izvo zvisina kukosha.
Basel Yopindirana neTreni
Geneva kuenda kuZermatt neTreni
Bern kuna Zermatt neTreni
Lucerne kuenda kuZermatt neTreni
7. Bachelor / Bachelorette Trip Kuti Aquitania, Furanzi
A bachelorette uye bachelor rwendo mukana wakanaka kuenda pane iyo kushambadzira, edza chimwe chinhu chitsva uye kupwanya iyo hectic maitiro. Wadii kuzviita muchimiro uye enda nzira dzese uye splurge pakudhiraivha? Glamping iyi inoshamisa sarudzo kune yepfungwa-inofema bachelor uye bachelorette rwendo. Nzvimbo yekuFrance inzvimbo inoshamisa yekukomberedza misoro yakasarudzika yeMongolia yakagara pamusoro pekufema kweFrance purazi neshamwari dzako dzepamoyo..
Dziva rekunze, michero, pakudya kwemangwanani pamubhedha, campfire, uye kufamba bhasiketi kwakakomberedza makomo akanaka kune zvese zvekudzokera-kune zvisikwa kusagadzikana rwendo rwe bachelorette munhu wese achayeuka. Bachelorette uye bachelor nzendo ndedzimwe nguva dzakanaka kwazvo muhupenyu hwomunhu wese. saka, inofanirwa kupembererwa munzvimbo dzakanakisa munyika uye Europe yakakodzera kurota kana yemusango bachelor uye bachelorette rwendo..
Zviri nyore kwazvo kudzidzisa kufamba kwakatenderera muEurope uye kufamba ne Save A Train kwese kwese kuenda neguta pane redu 7 akanakisa nzvimbo dzekuenda kwema bachelor.
Iwe unoda here kusimbisa yedu blog post "7 Yakanyanya Yakanaka Bachelor Uye Bachelorette Trips MuEurope" kune yako saiti.? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-bachelor-bachelorette-trips-europe/ ‎– (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / kuti / of kana / kes uye mimwe mitauro.